राजेश हमालको भाई राकेशलाई सुजाता र शेखरले काँग्रेसको झण्डा ओढाएर दिए श्रद्धाञ्जली – Online Nepal Site
को हुन् ती युवती जसलाई पारस शाहले मध्यराति ठमेल घुमाए ?
विश्वमा यति धेरै प्लेन दुर्घटना हुँदा पनि किन राखिँदैन प्यारासुट ? यस्तो छ कारण
टीकटकमा रातभरी लाइभ बसेर दुई दिनमै दुई लाख कमाए पुण्य गौतम
७७ जनाको ज्यान जोगाउने क्याप्टेन आङगेलु शेर्पासँग रहेकी यी महिला को-पाइलट को हुन् ? (भिडियोसहित)
बुद्ध एयरका एक यात्रु भन्छन्ः बाँचियो भने भेटौला भन्दै परिवारलाई म्यासेज पठाएँ
मनीषा कोइराला र हिमानी शाहबीच विशेष भेटघाट (केही तस्बिर)
हिजोको त्यो क्षण: बुद्ध एयरको फोर्स ल्याण्डिङबारे क्याप्टेनसँग संवाद यसरी गरिएको थियो, दुरबिन लगाएर क्याप्टेनले…
सोमवार फोर्स ल्यान्डिङ गरिएको जहाजमा के भएको थियो ? पाइलट विदामा बसे इन्जिनियरले जाँच गरेपछि फेरी उड्यो जहाज
मुख्य पृष्ठ /News/राजेश हमालको भाई राकेशलाई सुजाता र शेखरले काँग्रेसको झण्डा ओढाएर दिए श्रद्धाञ्जली
राजेश हमालको भाई राकेशलाई सुजाता र शेखरले काँग्रेसको झण्डा ओढाएर दिए श्रद्धाञ्जली
काठमाडौं, ९ साउन । अभिनेता राजेश हमालका भाई राकेश हमालको शव स्वदेश ल्याइएको छ । उनको शवलाई आज पशुपति आर्यघाटमा कोइराला परिवारका तीनजना सदस्यहरुले एकैसाथ नेपाली काँग्रेसको झण्डा ओढाएर अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिएका छन् ।
काँग्रेसका पूर्व विदेश विभाग सदस्य समेत रहेका हमाललाई महामन्त्री डा. सशांक कोइराला, केन्द्रीय सदस्यहरु सुजाता कोइराला र डा. शेखर कोइरालाले पार्टीको झण्डा ओढाएका हुन् । उनलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिन काँग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताका अलावा आफन्तहरु पशुपति आर्यघाट पुगेका थिए ।
कलेजोको समस्याका कारण आकस्मिक उपचारका क्रममा हमालको हिजो नयाँ दिल्लीमा निधन भएको थियो । उनको शवलाई आज काठमाडौं ल्याइएको थियो ।
अभिनेता राजेश हमालका भाई राकेश हमालको शव स्वदेश ल्याइएको छ । उनको शवलाई आज पशुपति आर्यघाटमा कोइराला परिवारका तीनजना सदस्यहरुले एकैसाथ नेपाली काँग्रेसको झण्डा ओढाएर अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिएका छन् ।
चट्याङले भारतमा एकैदिन १०७ को मृ’त्यु भयो, चट्याङबाट बच्न के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ त?
साउदीमा रहने नेपाली कामदारहरुको लागि खुसीको खबर ( पढ्नुहोस् )
‘पंकजले मसंग ३ पटक सिन्दुर पोते गरेको हो’ भन्दै प्रिन्जु पुगीन् पंकजकै घर (भिडियो हेर्नुस्)